MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၂)
ပြင်သစ်မှ တိုတဲလ် ရေနံတူဖေါ်မှု ကုမ္မဏီနှင့် မြန်မာပြည်မှ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တို့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ် စာချုပ်များချုပ်ဆိုမှု အဆိုအရ တိုတဲလ်ဘက်မှ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဌာနသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ကို ပေးဆောင်ပြီးမှ ရတနာသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကြီးအား လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာ ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ထိုးစစ်ဆင် ခြေမှုန်းနေမှုအား အဆုံးသတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ ရာဇသံ ချမှတ်ရန် ဆောင်ရွက်မှုအား တရုတ်ပြည်မှ ဗွီဒိုအာဏာဖြင့်ပယ်ချလိုက်ပြီး ၃ရက်ခန့်ကြာသောအခါ တရုတ်ပြည်မှ (တရုတ်ပြည်မြောက်ဖျား ရေနံရှာဖွေရေးကုမ္မဏီ)မှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း အား မြန်မာ့ရေနံ သဘာဝ ဌာနအား ဆုကြေးမစ လဒ်ထိုးသည့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ပြီး လက်ရှိ အေဒီ အမှတ် (၁) အားလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နောက်ထပ် ၂ သန်း ထပ်မံပေးဆောင်ပြီ အေဒီ (အမှတ် ၈) ရေနံလုပ်ကွက်အား ရယူခဲ့ရသည် ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖ်ါဝါရိလထုတ် South China Morning Post က တစေ့တစောင်း စောင်းမြောင်းထောက်ပြထားပါသ
၂၀၀၃ ခုနှစ်၏ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့အားထိုင်းနိုင် ငံသို့ ရောင်းချရရှိသည့် ၀င်ငွေအားလုံးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာ့ရေနံလုပ်ငန်းအသင်းစုနာမည်ဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင် ၄ထောင် ဒသမ ၃ ရာအား စင်္ကာပူ ဘန့်တွင်း ပေးသွင်းခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုငွေလုံးငွေရင်းသည် ဦးပိုင်ကုမ္မဏီနှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဌာနတို့ မည်သို့ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို ခြေရာကောက်သိရှိရန် ပြောက်ခြင်းမလှပြောက်နေခဲ့ရပြန်သည်။
Lieutenant General Tin Aye, chairperson of UMEHL from 2002-2010 and General Thura Shwe Man ranked Number5in Burma’s armed forces, often has made official visits to China, North Korea, Russia and Ukraine to buy arms and military equipment. In 2008 he travelled with the Chief of Staff of the Armed Forces to formalize military cooperation between Burma and North Korea. In early 2010 he was responsible for the purchase of 20 MiG-29 fighter jets worth 720 million from Russia.
ဆက်လက်ပြီး တတိယ အဆုံးသတ်ပိုင်း၏ အနှစ်ရသကို တင်ပြပေးပါမည်။ အမှန်တရား ချစ်မြတ်နိုးသူများလိုလား တောင်းတလိမ့်မည်ဟု မျော်လင့်ပါသည်။
Copy from - Minmaha Bagan
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:31 PM